Qarax ka dhacay magaalada Dhuusamareeb | HalQaran.com
Qarax ka dhacay magaalada Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud, ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay Qarax miino.
Qaraxaas ayaa la sheegay in lagu aasay goob qashinka lagu shubo oo ku dhegan Maqaayad shaah laga cabo oo ku taalla kasoo horjeedka Xarunta Inji oo ay degan yihiin hoggaanka sare ee Ahlusunna ee Waljameeca.
Saraakiisha Ciidamada Booliska Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan Qaraxa lagu aasay meesha Qashinka.
Ilaa iyo hadda lama sheegin khasaaraha ka dhashay Qaraxaasi ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka socota qaban qaabada la xiriirta doorashada maamulka Galmudug, waxaana si wayn loo adkeeyay ammaanka Magaaladaasi.